Iingcebiso ezi-5 zokubhala ibali elifutshane | Uncwadi lwangoku
Iingcebiso ezi-5 zokubhala ibali elifutshane
La uncwadi olufutshane ihlala ikhona. Nangona kunjalo, bekungekho kude kube yiminyaka yakutshanje xa, ngenxa yenethiwekhi yoluntu, iintlobo ezinje ngebali elincinci zivuselwe kwixesha elitsha legolide. Amabali ashwankathelwe kwivesi enye okanye ezimbini ezivula iingcango ezintsha kuncwadi oludlala ngengcinga yomfundi. Kananjalo ngobuhle obuzama ukukhuthaza imfihlakalo ethile kodwa, ngaphezulu kwako konke, ukwenza impembelelo. Ukuba uyazisebenzisa ezi zinto Iingcebiso ezi-5 zokubhala ibali elifutshane, uloyiso luqinisekisiwe.
2 Chaza imeko
3 Sebenzisa i-ellipsis
4 Dlala ngamagama
5 Isihloko esihle
Njengoko igama layo libonisa, ibali elifutshane lifuna ukuba mfutshane kakhulu kunebali. Nangona amanyathelo ohlobo luye ngokuthe ngcembe ekuhambeni kwexesha (ngamabali athabatha iziqendu ezininzi), uhlobo lwebali elincinci kuku xelela ibali elikhulu ngamagama ambalwa kangangoko kunokwenzeka.
Ukusuka kwingqondo yakho ubaleke iplanethi ehlala izithembiso kunye nemibono yokutshatyalaliswa kwayo. #Iincwadi zeYemh
Iposi ekwabelwana ngalo nguYineisy Mota (@yemh) kwi Aug 31, 2017 kwi-2: 42am PDT
Inoveli ibonakaliswa ngokwandisa umbono nokuwuzalisa ngamanye amacebo, ngelixa ibali liphinda liphinde lenze imeko ethile. Ukuba inoveli ibalisa ngobomi obude benkwenkwana efuna ukuba ngusomajukujuku de ifike eNyangeni, ibali liya kugubungela umzuzu wokufika kwayo, okanye xa yagqiba ukubhabha ezinkwenkwezini. Ibali elincinci lenza umsebenzi ofanayo nebali, kodwa nangamazwi ambalwa. Imalunga ne balisa imeko ngaphandle kokuchaza ngokucacileyo.
U-Ellipsis ngumfanekiso-ngqangi oquka amagama ashiyekileyo kubhalo aqondwayo ngokwawo. Umdibaniselwano obalulekileyo xa kufikwa ekubambeni ibali elinzulu ngakumbi kwiivesi ezimbalwa. Ibali elifutshane lisebenzisa ubuqili, gcina imfihlakalo ethile ngokubalisa okushwankathela imeko yelo bali, uye ngqo kuvuthondaba lwalo. Umzekelo, ukuba abalinganiswa ababini bebebuya kwaye bohlukana ubomi babo bonke ukuze ekugqibeleni baqonde ukuba bayathandana, "Emva kokubopha kakhulu nokukhulula, iqhina lakhula lomelela" lanele. Umzekelo.
«I-Ajuar» ngu @albertopiernas Senze icephe ebhedini. Ukuvuka kwam ndabuyela ekubeni yinyama nawe imela. Eli bali labhalwa kwiwebhusayithi yethu. Ukuba ufuna ukuba sipapashe enye yakho: Thumela yona apha http://www.microcott.es
Isithuba ekwabelwana ngaso ngemicouenta.es (@ microuenta.es) kwi Sep 1, 2017 kwi-1: 02pm PDT
Unokuba ujonge ukubhala ibali malunga nenqala kwaye ukufumane kunzima ukufumana amagama akweli bali alishwankathelayo. Ngenxa yeso sizathu, okanye ubuncinci kwimeko yam, ndinokuza nomfanekiso, ophefumlela wonke umxholo uwedwa: yeyiphi imvakalelo ekhuthazwa ngulo mfanekiso kuwe? Inayiphi imbali? Ngamanye amaxesha, igama elinye linokwanela ukutsala abanye abanye ukwakha ukubhala. Umzekelo, "ukukhanya" kutsala amagama anjenge "fireflies", "ubumnyama", "ilanga" ... Dlala nawo onke, kuba okokuqala, ibali elifutshane lihlala lisamkela izikweko.
Ixesha elibekiweyo, ngu-Omar Lara
Ukufumana isihloko esifanelekileyo somsebenzi wethu bekuhlala kusithatha ixesha elide kunokuba sibhale ibali elincinci ngokwalo. Nangona kunjalo, amaxesha amaninzi isihloko sinokuligcwalisa eli bali ngokongeza ixabiso ngakumbi, okanye, nokugqibezela intsingiselo yalo. Imizekelo, "iXesha lokubuya."
Ngaba unesibindi sokuthenga ibali elincinci nathi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iingcebiso ezi-5 zokubhala ibali elifutshane
I-8 yezona zinto zithethwa kakhulu ngezihloko zeenoveli zembali ngoku
Iminyaka engama-75 yesihlanu, isaga yabantwana yakudala kaEnid Blyton